Adin-tsain'ny mpandeha an'habakabaka: Mandehana an-tongotra eny amin'ny seranana
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Finlandia » Adin-tsain'ny mpandeha an'habakabaka: Mandehana an-tongotra eny amin'ny seranana
adin-tsain'ny mpandeha fiaramanidina
Atsofohy ao anaty moss ny rantsan-tongotrao, manofa fofona any an'ala, ary miala sasatra amin'ny fisotroana dite chaga. Misy bera mandeha milamina eo anilanao, ary misy vorona mihira ao anaty ala. Fa aiza ianao?
Ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki ianao. Ny marimarina kokoa, ianao dia ao Metsä / Skogen, ivon-toerana izay manovo ny herin'ny ala failandey.
Araka ny fanadihadiana maro, ny fandaniana fotoana amin'ny natiora dia tsy azo lavina fa misy fiatraikany tsara amin'ny fahasalamana. Ny fandehanana anaty ala dia naseho mba hampihenana ny adin-tsaina: mihena ny fitempon'ny fonao ary mihena ny fihenjanan'ny hozanao. Azo atao ihany koa izao ny fitsangatsanganana tsy misy fihenjanana ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki: Metsä / Skogen dia manolotra traikefa voajanahary miala sasatra mba hanoherana ny vokatry ny tontolon'ny seranam-piaramanidina misavoritaka.
“Metsä / Skogen dia mitady hampianatra ny olona hiaina ny fiainany tsy misy fihenjanana. Miara-miasa amin'ny famolavolana, ny onitra amin'ny emission ary ny matihanina amin'ny fahasalamana, dia manangana fotokevitra iray izahay izay ny fiadanan'ny olona sy ny natiora no ivon'ny zavatra rehetra. Ny hevitra hanolorana feo, fofona ary tsiro voajanahary dia ny hamoronana ny fiainana marina any Finnish tena azo tanterahina, izay manampy ny olona hilamina eo afovoan'ny andro mikorontana, ary manome topimaso tsy manam-paharoa momba ny natiora failandey, "hoy i Carita Peltonen, tale jeneralin'ny Metsä / Skogen.
Metsä / Skogen dia manitatra ny asany any amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki ary hanolotra mpandeha isan-karazany ny vokatra famolavolana maharitra sy tia tontolo iainana ary tsiro avy amin'ny ala failandey. Metsä / Skogen dia toerana ahafahanao miala sasatra sy milamina — ohatra, amin'ny fitsangatsangana an-tongotra virtoaly any anaty ala. Azonao atao ihany koa ny lasa mpiaro ala ao Metsä / Skogen. Avy amin'ny menio ala noforonina niaraka tamin'ny Helsinki Foundation, azonao atao ny misafidy ampahany amin'ny ala Lapland hiarovana anao.
Ny Programa momba ny fampandrosoana an'i Helsinki dia mandroso tsara. Na dia misy aza ny tranobe vaovao, ny hevitra vaovao sy ny tolotra vaovao ho an'ny mpandeha failandey sy iraisampirenena dia novolavolaina. Finavia dia mikendry ny hahatonga ny seranam-piaramanidina Helsinki ho iray amin'ireo seranam-piaramanidina tsara indrindra eran'izao tontolo izao amin'ny resaka traikefa an'ny mpanjifa. Finavia sy Metsä / Skogen dia samy te-hanamafy orina sy hampiroborobo ny traikefa momba ny fiadanam-poana finoa sy ny kalitao maharitra.
“Metsä / Skogen dia maneho ny karazana fahaiza-manao maharitra maharitra failandey tianay hatolotra ny mpandeha anay. Ny fomba fiainana tsy manam-paharoa dia manitatra ny serivisy misy ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki ary manohana ny tanjon'i Finavia hanavao ny tenany ary hamorona vahaolana sahisahy hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa ny seranam-piaramanidina sy ny marika any Failandy. Faly izahay fa nanapa-kevitra ny Metsä / Skogen hanokatra ny toeram-pivoahana faharoa ao amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki, ivon-toerana eo anelanelan'i Azia sy Eropa, "hoy i Nora Immonen, talen'ny Finavia Business Unit Business Unit (Helsinki Airport).
Metsä / Skogen dia mitondra ny hery mampitony sy manasitrana ny ala failandey mankany amin'ny seranam-piaramanidina Helsinki.
Metsä / Skogen dia manambatra fivarotana, Mushroom Bar, traikefa ary toerana milamina. Ny toetra ara-tontolo iainana sy ny fiarahamonina dia eo afovoan'ny Metsä / Skogen. Nisokatra ny mey Metsä / Skogen Airport Helsinki Airport amin'ny Mey 2020. Nisokatra tao Mannerheimintie, Helsinki, ny volana Oktobra 2019 ny fivarotana Metsä / Skogen & Mushroom Bar.
Mamerina ny mpanjifan'ny Jade izao ny Cruise Line norveziana
Nanao ahoana ny fizotran'ny fizahan-tany any Karaiba tamin'ny taona 2019?